Isiseko sebalandeli bekham (kubandakanye nalabo bahamba ngesondo) - iDihoo Industry (Hongkong) Co., Limited
Isiseko sebalandeli bekham (kubandakanywa nalabo bahamba ngokuhamba)
Ubuninzi obungaphandle (OD) yendibano ephethe i-cam-follower ubuso bayo obusebenzayo- "ngokuqhelekileyo eyenziwe yensimbi, i-nylon, i-urethane, i-polyamide, okanye ezinye izinto ezibunjiweyo. Ezi zibini ze-OD kunye nomnye umatshini wendawo • Ngokwesiko le nto yayiyikhampani engumatshini wolu hlobo - njengoluhlu oluchanekileyo lwetafile yokukhomba. Amathebhu afana neendlela ezizenzekelayo zineenkcazo ehambayo ezinqamle kwi-dr drum ebenzela abalandeli, okokudlulisela amandla kumveliso.
Abalandeli bakaCam bafumana nokusetyenziswa kwiindibano ezizibandakanya kunye neendlela ezihambayo kunye nezinye iindlela ezenziwe ngonxibelelwano kwiindibano eziqhelekileyo.
Abalandeli beCam badibanisa kumashishini ngeendlela ezimbini. Abalandeli beekham nkqutyana zabafundi baquka i-shaft encane efakwe kwisalathisi sangaphakathi esilandelayo (i-ID) yokudibanisa kwisakhelo somatshini kunye ne-nut okanye ifowuni efanayo yokuqinisa. Uhlobo lwe-Yoke umlandeleli wekhampasi (oluchongiweyo nge-ID yabo evulekileyo) kaninzi iqabane kumashini oomatshini ngokusebenzisa umgca wokunyanzela kwintambo yangaphakathi enzima edlalwa ngumgca wokugcina. Ngenxa yokuba ayilona i-designtile engabonakaliyo, abalandeli beeryokhwe bayabonakalisa ukungcola. Kodwa abalandeli be-cam cam bayabaluleka kwiindawo ezininzi zezicelo- kuquka abo baphantsi kwemithwalo ephakamileyo.
Umqulatho oqhelekileyo we-cam-follower usebenzisa ama-roll rollers ukuba athwale imithwalo ephezulu ye-radial; apho izicelo zifuna i-axis ukuba isebenze ngesivinini esiphezulu, i-cage ingahlukanisa abaxhasi.
Apho imithwalo iphezulu kwaye i-axis idinga amandla okwenza umthwalo ophezulu, abalandeli bekham banokufaka iimilo zomgca eziqhelekileyo. Nangona kungaphaya kokugxilwa apha, abanye abalandeli bekham elayini bakha nakwizithuthi ezilula.
Qaphela ukuba abalandeli bekhamera bahluke kumzala abo abathwala i-roller ngezindlela ezimbalwa. Ngenxa yokuba ezi zilandelayo ziyakwazi ukuphazamiseka kwiintlanganiso, zinokuqiniswa ngokukhawuleza ukusuka kwisakhelo somatshini okanye ngezindlu. Ngokwahlukileyo, uhlanga olungaphandle lwalowo mlandeli wekham kufuneka lube lukhuni ukukhusela ukukhwabanisa - ikakhulukazi phantsi komgca wokulayisha. Ukongezelela, abalandeli abaninzi bekhampani baquka iindawo zokungcwatywa kwamanzi kunye nokugqithiswa kwamanzi okugqithiseleyo ukuze baxhomekeke kwiindawo eziqhutywe ngethuba lokusebenza - ikakhulukazi abo basebenzayo baveze kumacandelo omatshini angakhuselekanga.
Abalandeli abaninzi bekhamera banamapresenti angaphantsi aphezulu (OD), ngelixa abanye (ingakumbi ezo zicelo ezihamba ngokukhawuleza) ziquka ii-ODs eziqhelekileyo, ezifakwe kwi-edge-flanged, okanye i-vee ezifake i-vee zenze iimboqo kunye nemizila eyenziwe ngejometri yokulinganisa.
Abalandeli bekamela abaqaqambileyo banokuhlawula amaxesha alishumi ukuchithwa kakubi kwamalungu abalandeli beenkcukacha zenkcubeko.
Umlandeli wekhamera eli-linear (umlandeli womkhondo) ilungiselelo lomfanekiso othotyelwe uGÃ¼del US
Abanye abalandeli bekham basebenza njengabalandeli beengcamango ngokubandakanya imizila yokuhambisa ukuhamba. Ezi zakhiwo ziqheleke ngokubanzi kwiinkqubo zokugcina kunye nokubuyisela (AS / RS) kunye nee-RTU ezi-7 ezikhankanywe ngaphambili.
Oku kungenxa yokuba iinkqubo ezixhomekeke kwiinkamela-mlandele zihamba ngokugqithiseleyo iibhereth linear ezibizwa ngokuba yizikhokelo zeprofayili apho ukuchaneka nokuchaneka kwe-ultra-high akubalulekanga kunobunzima, ukufakela ngokukhawuleza nokuxolela, ukuguqulwa kwesantya esiphezulu kunye nobomi obude.
Iimpawu zoMgca oMgca weeRbotic Positioning
I-Linear â € œlineupâ € ichukumisayo kwiNgqungquthela yeRobotic ngoJuni: Yiza kukuqonda ubuchwepheshe